जिडब्लुएमको टेस्ट ड्राइभ र एक्सचेन्ज क्याम्प हुँदै « Taksar News
जिडब्लुएमको टेस्ट ड्राइभ र एक्सचेन्ज क्याम्प हुँदै
काठमाडौं । ग्रेट वाल मोटर्स (जिडब्लुएम) गाडीहरुको नेपालको लागि आधिकारिक विक्रेता भि.जी. ईम्क्पेक्स प्रा.लि. ले ‘टेस्ट ड्राइभ र एक्सचेन्ज क्याम्प’ आयोजना गरेको छ । आफ्नो दुई एसयूभी थर्ड जेनेरेसन हवाल एच सिक्स र हवाल जोलायन का साथै पीक–अप पावरको टेस्ट ड्राइभ र एक्सचेन्ज क्याम्प आयोजना गरेको हो ।
यो आयोजना मङसिर १४ गते सकिनेछ । यस क्याम्पमा इच्छुक जोसुकै पनि सहभागि हुन सक्ने जनाइएको छ । सहभागि हुन इच्छुकहरुले थापाथली, काठमाडौं स्थित ग्रेट वाल मोटर्स को शाोरुममा गएर बिहान १०ः०० बजे देखि बेलुका ५ः०० बजे भित्र निशुल्क टेस्ट ड्राइभ तथा एक्सचेन्जको फाइदा लिन सक्नेछन् ।
टेस्ट ड्राइभका लागि आउने प्रत्येक ग्राहकहरुले आकर्षक उपहार पाउनुका साथै ४३ इन्चको मी स्मार्ट टि.भी. जित्ने मौका पाउनेछन् । यस क्याम्प अन्र्तगत ग्राहकहरुले गाडी एक्सचेन्ज गरी बुकिङ्ग गर्न सकिनेछ र आकर्षक बोनस, नगद छुट, निःशुल्क एसेसोरिज र सहज फाइनान्सिङको सुविधा पनि उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
पोखरामा एसवाईएम मोटरसाइकलको टेष्ट राइड एण्ड एक्स्चेन्ज क्याम्प
एमजीको विद्युतीय गाडी नेपाली बजारमा
सुजुकीको नयाँ गाडी ‘अल न्यू सुजुकी सेलेरियो’ सार्वजनिक
भ्यालेन्टाइन डेको अवसर पारेर टिभिएस स्कुटरमा ‘कनेक्ट टु लभ’ योजना
सीजी मोटोर्कपले ग्राहकको घरमै दिने गाडी मर्मतको सेवा
फोर्डद्धारा नेपाली ग्राहकहरुप्रति आफ्नो प्रतिवद्धता दोहोर्‍याउँदै